JSON Viewer: Ngwá Ọrụ Na-akwụghị Aka Iji Lelee ma Ele Nrụpụta JSON API nke Gị
Gịnị ka API pụtara? Na Acronyms ndị ọzọ: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL
Tọzdee, Septemba 24, 2015 Friday, December 8, 2017 Douglas Karr
Mgbe ị na-eji ihe nchọgharị gị, ihe nchọgharị gị na-arịọ maka ihe nkesa ndị ahịa na ihe nkesa na-eziga faịlụ ndị nchọgharị gị gbakọtara ma gosipụta ibe weebụ. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe nkesa gị ma ọ bụ ibe weebụ gwaa ihe nkesa ọzọ? Nke a ga - achọ ka ị tinye koodu na API. Gịnị ka API pụtara? API bu okwu ngosiputa maka ngwa mmemme. API bụ usoro nke usoro,